2016 ~ Htet Aung Kyaw
2:51 PM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily, 29,Dec, 2016.
မြန်မာနုိုင်ငံမှာ သင်္ကြန် ၁၀ ရက်ကုို နှစ်သစ်ကူးဟောလီးဒေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသလုို ဥရောပမှာလည်း ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလအဖြစ် သတင်းတပတ်ခန့် ဟောလီးဒေးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်သစ်မြန်မာ တချို့ကတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်မှာ ဟောလီးဒေးယူသလုို ခရစ်ယန်နှစ်သစ်ကူး ဒီဇင်ဘာမှာ လည်း ဟောလီးဒေးယူလုိုက်တာပါပဲ။ ဒီလုိုနဲ့ ဒီဇင်ဘာဟောလီးဒေးမှာ ဘယ်သွားကြမလဲ၊ နှစ်သစ်ကုို ဘယ်လိုကြိုရင်ကောင်းမလဲဆုိုပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေ ရှိလာနေပါတယ်။
တနှစ်လုံး ပင်ပမ်းထားသမျှ နှစ်သစ်ကူးမှာ ၃-၄ ရက်လောက် ခရီးထွက်ပြီး အနားယူအပန်းဖြေ သင့်တာပေါ့။ လူတုိုင်း ခရီးထွက်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသတင်းတပတ်စာအတွက် ၀င်ငွေကိစ္စကုို ဘယ်လုိုဖြေရှင်းမလဲ။ လစာမဲ့လား။ လစာအပြည့်နဲ့ ဟောလီးဒေးလား။ ဒီနေရာမှာတော့ မြန်နုိုင်ငံက လစာပေးစနစ်နဲ့ အနောက်တုိုင်းလစာပေးစနစ် သုို့မဟုတ် ဟောလီးဒေးမန်းနီး Holiday money ပေးတဲ့စနစ် ကွာသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံအလုပ်သမားဥပဒေမှာ Holiday money ပေးတဲ့စနစ် မရှိသေးဘူးလုို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီနုိုင်ငံတွေ မှာတော့ တနှစ်မှာ တလ (သတင်း ၄ ပတ်) အလုပ်သမားတုိုင်း ဟောလီးဒေးယူခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ၄ ပတ် ဟောလီးဒေးသွားနေစဉ် တနှစ်စာဝင်ငွေရဲ့ ၁၂ ရာခုိုင်နှုန်း (တနှစ်စာရဲ့ ၁၂ ရာခုိုင်နှုန်းဟာ တလစာပုံမှန် ၀င်ငွေ လောက်ရှိပါတယ်) ကို အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားဘဏ်ထဲ ထည့်ပေးရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဥရောပရဲ့နွေရာသီ ဇွန်လဆန်းမှာ ဟောလီးဒေးမန်းနီးဝင်ပြီး အခွန်ပုိုငွေ ပြန်အမ်းတာကုိုလည်း အဲဒီလမှာပဲ ရလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နွေရာသီမှာ ဥရောပသားတွေ မိသားစုအလုိုက် ခရီးထွက်ကြတာကုို သတိထားမိကြမှာ။ ဒါက နော်ဝေးတွေ အများစုခရီးထွက်လေ့ရှိတဲ့ နွေရာသီဟောလီးဒေးအကြောင်း။ အခုပြောနေတာက ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ဟောလီးဒေးဆုိုတော့ ဒီအချိန်မှာ Holiday money ဘယ်ရတော့မလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာ အခွန်မဖြတ်တဲ့အတွက် လစာအပြည့်ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အခွန်က ၂၅ ကနေ ၃၅ ရာ ခုိုင်နှုန်းအထိဖြတ်လေ့ရှိတာကြောင့် အရင်လတွေက ၇ သိန်းပဲရသူတွေဟာ ဒီဇင်ဘာမှာတော့ ၁၀ သိန်း အပြည့်ရတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအပုိုငွေနဲ့ နှစ်သစ်ကူးမှာ ခရီးထွက်ကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နွေရာသီတုန်းကရတဲ့ဟောလီးဒေးငွေကို နည်းနည်း ချန်ထားပြီး နှစ်သစ်ကူးရတဲ့ငွေနဲ့ပေါင်းကာ ခရီထွက်တယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ဒါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး ခရီးထွက်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါ။ တချို့ကတော့ နွေရာသီလည်းထွက်၊ ဆောင်းရာသီလည်းထွက်ဆုိုတော့ ဟောလီးဒေးမန်းနီး ဘယ်ကျန်တော့မလဲ။ ဒီတော့ Credit Card (အကြွေးယူနုိုင်တဲ့ ကတ်ပြား) သုံးပြီး ခရီးထွက်ကြ။ နောက်မှ အရင်းနဲ့အတုိုးပေါင်းပြီး ပြန်ဆပ်ကြပေါ့။ ခုနကပြောတဲ့ ဟောလီးဒေးမန်းနီးဆုိုတာက အနည်းဆုံး ၂ နှစ်ဆက်တုိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးသူ၊ အမြဲတန်း အလုပ်ရှိသူတွေသာရတဲ့အခွင့်အရေးပါ။ ဒီတော့ ပုံမှန် အလုပ်မရှိသူနဲ့ လူငယ်တွေကတော့ အဆင်ပြေ သလုို ခရီးထွက်ရမှာပေါ့။
စာဖတ်သူတွေကော ဘယ်ကိုခရီးထွက်ဖုို့ပြင်ထားပါသလဲ။ နော်ဝေးက မြန်မာအတော်များများတော့ ဒီဇင်ဘာမှာ မြန်မာနုိုင်ငံဆီပြန်လည်ကြပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ နွေရာသီတုန်းက မြန်မာနုိုင်ငံဆီ သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့် ဒီဆောင်းမှာ ခရီးဝေးသွားဖုို့ ဘတ်ဂျက်မရှိတော့ပါ။ ဒီတော့ စရိတ်သိတ်မကုန်တဲ့ နီးနီးနားနား ဥရောပထဲက မြေထဲပင်လယ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျွန်းတွေကိုသွားရင်ကောင်းမလား။ အဲဒီကျွန်းတွေ ဟာ အခု ဒီဇင်ဘာမှာတောင် အပူချိန်က ၂၀ ဒီဂရီဝန်းကျင်ရှိတာကြောင့် (နော်ဝေးမှာက အနှုတ် ၅ လောက်ရှိနေပါတယ်) နော်ဝေးအတော်များများ အဲဒီဖက် သွားလေ့ရှိပါတယ်။
တချို့ကတော့ ရေခဲတောင်တွေပေါ်တက်၊ Hytte လုို့ခေါ်တဲ့ အပန်းဖြေတဲတွေမှာ သွားနေ၊ နှင်းလျောစီး၊ တောထဲလမ်းလျောက်ရင်း အနားယူကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ နေသာတဲ့ အာရှနဲ့ အာဖရိကဆီ ခရီးထွက်ပေါ့။ ဘယ်ကုို သွားရင်ကောင်းမလဲဆုိုပြီး စရိတ်သက်သာမဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုလုိုက်ရှာတော့ ကုိုယ့်ဘတ်ဂျက်နဲ့ကုိုက်တာ ဘာမှမတွေ့မိ။ နောက်ဆုံးတော့ နော်ဝေ-ဒိန်းမတ် ပြေးတဲ့ (ဇိမ်ခံသဘောင်္လုို့ ခေါ်နုိုင်ပါတယ်) သဘောင်္ကြီးကိုပဲ စီးခဲ့ရ ပြန်ပေါ့။ ဒီသဘောင်္ကို စီးဖူးနေတာ အခေါက်ပေါင်းမျာစွာရှိနေပြီဖြစ် ပေမဲ့ ဒီတခေါက်ကျမှ Spa ခေါ် ရေနွေးစိမ်အ ပန်းဖြေတဲ့အခန်းနဲ့ Sauna ခေါ် ချွေးထုတ်တဲ့အခန်းထဲ ၀င်မိပါ တယ်။
နော်ဝေးမှာနေတဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ဒီသဘောင်္ကုို တနှစ်တခေါက်မကစီးဖူးခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာ အများစုရဲ့ ထုံးစံအတုိုင်း ဂျုတီဖရီးဆုိုင်မှာ အရက်ဝယ်ဖုို့နဲ့ (နော်ဝေးမှာ အရက်နဲ့ဆေးလိပ်က အတော် ဈေးကြီးပါတယ်) မိတ်ဆွေတွေဝုိုင်းဖွဲ့သောက်ဖုို့လောက်သာစိတ်ဝင်စားပြီး ရေနွေးစိမ်အနားယူဖုို့ တခါမှ မစဉ်းစားမိပါ။ spa တွေ၊ sauna တွေ သဘောင်္ပေါ်ရှိနေမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ အခုတခေါက်ကျမှ မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ သတင်းပေးမှုကြောင့် ဒါကို ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကသွားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖင်လန်ခရီးစဉ်အတွင်း (ရေခဲရဲတုိုက်နှင့် အာတိတ်စက်ဝုိုင်းဆီခရီးသွားခြင်း ဆောင်း ပါးထဲကလုို) အပူချိန် ၁၀၀ ဒီဂရီလောက်ရှိတဲ့ ဆောင်နာမှာချွေးထုတ်၊ ပြီးရင် ရေခဲအမှတ်အောက် ၂၀ လောက်ကျနေတဲ့ ရေခဲရေအုိုင်ထဲခုန်ချ၊ Shock ရုိုက်တဲ့ အရသာကုို ကျနော်မှတ်မိနေဆဲပါ။ အခု ဒီသဘောင်္ပေါ်မှာ အဲဒီလုိုလုပ်လုို့ရတယ်ဆုိုတော့ အုိုကေ ပေါ့။ ချွေးထုတ်၊ ရေခဲရေထဲခုန်ချတဲ့အပြင် ရေနွေးနဲ့ နှိပ်ပေးတဲ့စက်တောင်ရှိလုိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီနှစ် ခရစ်စမတ်ရာသီမှာ သဘောင်္စီးရတာ သိပ်တန်သွားတယ် ဆုိုပါတော့။
နှစ်သစ်မှာတော့ သဘောင်္ထပ်စီးလုို့မဖြစ်တော့။ ဘာကြောင့်လဲဆုို နှစ်သစ်ကူးည သဘောင်္ဈေးက မြေထဲ ပင်လယ်က ကျွန်းတွေဆီသွားတဲ့စရိတ်ထက်ပုိုများနေလုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်နှစ်တွေကလုပ်နေကြ အတုိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ညသန်းခေါင်မတုိုင်ခင်လေးမှာ အိမ်နီးဝန်းကျင်က ဆီးနှင်းတွေခဲနေတဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်တက်၊ မီးရှုးမီပန်း တွေလွှတ်၊ Happy New Year သုို့မဟုတ် နော်ဝေးလုို Godt Nytt År လုို့အော်ပြီး နှစ်သစ်ကုိုကြိုရမှာပေါ့။
ဒါက ကျနော်တို့လုို ခရီးဝေးထွက်ဖုို့ ဘတ်ဂျက်မရှိသူတွေကုိုပြောတာပါ။ ငွေပိုငွေလျှံလည်းရှိမယ်။ Romantic လည်း ဖြစ်ချင်တယ်ဆုိုတဲ့လူတွေကတော့ ဟုိုး…နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်း၊ ဖင်လန်မြောက်ပုိုင်းက ရေခဲဟုိုတယ်တွေဆီသွားပြီး မြောက်ပုိုင်းရောင်ချည် (Northern Light) ကုိုကြည့်ကာ နှစ်သစ်ကုို ကြိုလေ့ရှိ တယ်ဆုိုပါတယ်။
စာရေးသူ ထုိုင်းမှာနေစဉ်တုန်းကတော့ နှစ်သစ်ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ နေထွက်ချိန် Sunrise ကုို မြင်ခွင့်ရဖုို့ဆုိုပြီး ထုိုင်း အလယ်ပုိုင်းရှိ သဘာဝဥယဉ်တောတန်းထဲက တောင်ပေါ်မှာ တဲထုိုးပြီး ညအိပ်စောင့်ဖူးပါတယ်။ ကုိုယ့်လုိုပဲ ရွက်ဖျင် တဲငယ်တွေထုိုးပြီး နှစ်သစ်ကုိုစောင့်နေသူ ထောင်နဲ့ချီရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေက သဲ သောင်ပြင်မှာ ရွက်ဖျင်တဲထုိုးပြီးစောင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုတော့ မြန်မာနုိုင်ငံက လူငယ်တွေ (လူလတ်တွေ လည်းပါ ပါတယ်) လည်း ထုိုင်းကလူငယ်တွေလုိုပဲ တောင်ပေါ်နဲ့ ကမ်းခြေတွေဆီသွားပြီး ရွက်ဖျင်တဲထုိုးကာ နှစ်သစ် ကုိုကြိုဖုို့ပြင်နေတဲ့ ဓတ်ပုံတွေကို Fcaebook မှာ မြင်နေရပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ညဟာ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက် နှစ်သစ်ကူးပွဲဆုိုပေမဲ့ အခုတော့ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲ ဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာအပါဝင် တကမ္ဘာလုံးနီးပါးမှာ ခရစ်နှစ်နဲ့ ခရစ်ပြက္ခဒိန်ကုို ကမ္ဘာ့ပြကဒိန် အဖြစ် အသုံးပြုကြနေပြီ မဟုတ်ပါလား။ မနက်ဖြန် နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ကုို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နာဝါရီလ ၁ ရက်နေ့လုို့ပြောတာကိုက ခရစ်နှစ်ကို ကျနော်တို့လက်ခံထားတဲ့သဘော၊ grobalization ထဲ ကျနော်တုို့ အားလုံး ရောက်သွားတဲ့သဘောပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဘယ်လုိုပုံစံနဲ့ပဲ နှစ်သစ်ကုိုကြိုကြို၊ အရေးကြီးတာက Happy New Year! လုို့ အော်ကြတဲ့အတုိုင်း နှစ်သစ် မှာ နှစ်ဟောင်းထက်ပုိုပြီး Happy ဖြစ်ဖုို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ အလုပ်အကုိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေ၊ နုိုင်ငံရေးအရ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ပုိုကောင်းလာဖုို့မျှော်လင့် ရင်း ၂၀၁၇ ကုို ကြိုဆုိုလုိုက်ရပါတယ်။ ။
2:30 AM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily, 24 Dec, 2016.
စစ်ပွဲကုို ထောက်ခံသင့် မသင့်
NLD အစိုးရသစ်လက်ထက် အထင်ရှားဆုံးတွေ့ရတဲ့ ဒီမုိုကရေစီအခွင့်အရေးတခုကို ပြပါဆုိုရင် လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်လို့ ဖြေရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုို ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ကနေ (နေပြည်တော်မှ အပ) ဟုိုး… ကျေးလက်ဒေသတွေအထိ ဆန္ဒပြပွဲတွေနေ့စဉ်ရှိနေတယ် မဟုတ်ပါလား။ ကမ္ဘာ့နုိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်း အလားတူဆန္ဒပြပွဲတွေကုို မြင်နေရတယ်ဆုိုတော့ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ဒီမုိုကရေစီ ရေစီးထဲ မြန်မာတွေ ၀င်ရောက်လာတဲ့သဘောပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တခြားနုိုင်ငံအတော်များများမှာ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပဲတွေ့ဖူးပြီး မြန်မာနုိုင်ငံမှာကျမှ စစ်တုိုက်ရေးကို ထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ ထူးခြားချက်လုို့ ဆုိုရပါလိမ့်မယ်။ စစ်များများတုိုက်ပါ၊ သူပုန်တွေကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းပါဆုိုပြီး ထောက်ခံလုိုက်မိတာကြောင့် အရှိန်လျော့စပြုလာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ၂၁ ပင်လုံ ငြိမ်း ချမ်းရေးညီလာခံတွေ ဘယ်အနေအထားအထိ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမလဲ ဆုိုတာကုိုတော့ အဲဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်သူတွေ စဉ်းစားမိဟန်မတူပါဘူး။ ဆန္ဒပြပွဲကိုခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရအာဏာပုိုင်တွေဖက်ကကော ဒါကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမိပါရဲ့လား။
တရားသောစစ်၊ မတရားသောစစ် စသဖြင့် ဘယ်လုိုပဲ နာမ၀ိသေသနတွေတပ်ထားပါစေ၊ တကယ်တော့ စစ်ပွဲဆုိုတာ လူသတ်တဲ့ပွဲပါပဲ။ Kill or Die သဘောတရားအရ သူ့ကိုကုိုယ်က အရင်ဦးအောင်မသတ်နုိုင်ရင် သူကကုိုယ့်ကုို ပြန်သတ်မှာဆုိုတော့ အရင်ဦးအောင်သတ်နုိုင်ရေးဟာ စစ်သားတွေရဲ့တာဝန်ပါ။ ဒီတော့ စစ်ဖြစ်ပြီဆုိုတာနဲ့ နှစ်ဖက် စစ်သားတွေသေမယ်၊ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အသက်၊ အုိုးအိမ် ဆုံးရှုံးမယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီး၊ တုိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာငွေတွေဆုံးရှုံး စသဖြင့် ဘာတကွက်မှကောင်းတာမရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့်ပွဲ စစ်ပွဲတွေရပ်ပါ။ စစ်အတွက်ကုန်ကျမဲ့ငွေတွေကို စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေအတွက် သုံးပါဆုိုပြီး တကမ္ဘာလုံး ဆန္ဒပြနေကြတယ်မဟုတ်ပါလား။ မြန်မာနုိုင်ငံကျမှ စစ်ပွဲရပ်ဖုို့မပြောပဲ စစ်ပွဲအောင်ပါစေဆုိုပြီး ဆန္ဒပြနေကြတယ်ဆုိုကတော့ တခုခုလွဲနေပြီထင်ပါတယ်။ ဒီအလွဲက ဘယ်အထိ ဦးတည်သွားစေနုိုင်သလဲ။ အစိုးရသစ်ရဲ့ ကတိက၀တ် ၃ ချက်ထဲက (အခြား ၂ ချက်ကတော့ ဖွဲစည်ပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမုိုးရေး) အဓိက ဦးစားပေးလုပ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပန်း ချက်ကုို ပျက်သွားစေနုိုင်သလား။
အားလုံးသိတဲ့အတုိုင်း မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ် (အစုိုးရအခေါ် လက်နက်ကုိုင်ပတိပက္ခ) ဖြစ်နေတာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရကတည်းကဆုိုတော့ နှစ် ၇၀ ပြည်ဖုို့ ၂ နှစ်ပဲလုိုပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစစ်ပွဲ ဘာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။ ဘယ်လိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်း ကြမလဲဆုိုတာကို ဆွေးနွေးသူ အတော်နည်းပါတယ်။ အရင် စစ်အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက်က ဆွေးနွေးခွင့်မရတာကုိုတော့ ထားလုိုက်ပါတော့။ အခု လူထုကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒါကိုပွင့်ပွင့် လင်းလင်းဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
၂၁ ပင်လုံညီလာခံတွေ၊ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေပေမဲ့ အများပြည်သူကြားမှာ၊ အထူး သဖြင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနဲ့ဆုိုင်တဲ့ ကျောင်းပြဌဏ်းစာအုပ်တွေမှာ ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအသိပေးထားသလဲ။ အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်မဲ့လူငယ်တွေက ဒီနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ် ဘယ်လိုအမြင်ရှိကြသလဲဆိုတာဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကုိုယ်ပုိုင်ပြဌဏ်းခွင့်၊ ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် တုိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ တုိုင်းရင်းသားလက်နက် ကုိုင်အဖွဲ့တွေကို သောင်းကျန်းသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး တပ်မတော်က အပြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖုို့လုိုတယ်လို့ အရင်စစ် အစိုးရခေတ်ကပြဌဏ်းချက်အတုိုင်း ဆက်သင်နေ မယ်ဆုိုရင်တော့ အဖြေမှန်ရဖုို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
၀ါဒဖြန့်ချီရေးကုို ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်အထိ လုပ်တာကြာသွားရင် အဲဒီဝါဒဖြန့်ချီရေးကို အမှန်ဆုိုပြီး ၀ါဒဖြန့်နေ သူတွေကုိုယ်တုိုင်က ထင်လာနုိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံက လူများစု ဒီဝါဒဖြန့်ချီရေးအောက်မှာ မှိုင်းမိနေပြီလို့ စာရေးသူက ထင်ပါတယ်။ မဆလ ခေတ်မှာလူဖြစ်လာတဲ့ စာရေးသူဟာ ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ အတုိုင်း စစ်သားတွေကို တုိုင်းပြည်ကွယ်ရေးအတွက်တုိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်မြင်ပြီး သူပုန် (လက်နက်ကုိုင်တော် လှန်ရေးသမား) တွေကို လူဆုိုးတွေ၊ တုိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေသူတွေ၊ ဟိုနားဒီနား ဗုံးထောင်၊ တံတားဖျက်၊ ဆက်ကြေး ကောက်နေသူတွေအဖြစ် မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြိုခွဲခံရပြီးနောက်ပုိုင်း ကျောင်းသားတွေထောင်နဲ့ချီ နယ်စပ်ဒေသရှိ သူပုန်နယ်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကျောင်းစာအုပ်ထဲကသူပုန်နဲ့ လက်တွေသူပုန် အတော်ကွာ ခြားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တံတားဖျက်လုို့၊ ဗုံးပေါက်လုို့ အများပြည်သူဒုက္ခရောက်ရတဲ့ လက်တလော ပြသနာကိုကျော်ပြီး ဘာကြောင့် ဒီလူတွေ ဒါကို လုပ်နေတာလဲ။ ဘာတွေကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေတာလဲ ဆုိုတာကုိုပါ စဉ်းစားဖုို့လုိုလာပါတယ်။ ခဲလုံးနောက် ကုိုချည်းလုိုက်မနေပဲ ခဲလာရာကိုခြေရာခံဖုို့လုိုပါတယ်။
ဘက်မလုိုက်တဲ့ Over View အမြင်ကို အရင်ရှာပါ
ကျနော်ဒီလုိုရေးလုိုက်လုို့ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေက အားလုံးကောင်းပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်က အားလုံးဆုိုးနေတယ်လုို့ မဆိုလုိုပါ။ လူ့သဘာဝအတုိုင်း အကောင်းနဲ့အဆုိုးဟာ နေရာတုိုင်းမှာ ဒွန်တွဲပြီး ရှိနေပါတယ်။ တပ်မတော်ထဲမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုိုချင်သူ၊ ဒီအချိန်ဟာ စစ်တုိုက်ဖုို့မလုိုတော့ဘူး။ အိမ်နီးချင်းနုိုင်ငံတွေကိုအမီလုိုက်နုိုင်ဖုို့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ဖုို့လုိုနေပြီဆုိုတာကို နားလည်သဘောက်ပေါက်သူ အများကြီးရှိနုိုင်ပါတယ်။ နယ်စပ်မှာနေတဲ့ သူပုန်တွေက အိမ်နီးချင်းနုိုင်ငံတွေ နဲ့နှိုင်းယှဉ်နုို်င်တဲ့အမြင် ပုိုတောင်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတုို့အားလုံးဟာ စစ်သားတွေဖြစ်တာကြောင့် နုိုင်ငံတကာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရေးက ဒုတိယ၊ စစ်အနုိုင် တိုိုက်ရေး၊ ကိုယ့်နယ်မြေကိုယ် ထိမ်းချုပ်ထားနုိုင်ရေးက ပထမ လုို့ခံယူတာကို မှားတယ်လုို့ ပြောဖို့ခက်ပါ တယ်။ သူတို့ကုိုမှားတယ်လို့ပြောဖို့ခက်နေရင် ဘယ်သူတွေကိုပြောဖို့လွယ်မလဲ။ လေ့လာသူတွေ၊ ကြားဝင် စေ့စပ်သူတွေ၊ သတင်းသမားတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အများပြည်သူအပေါ်သြဇာရှိသူတွေဟာ လက်နက်ကုိုင်ပတိပက္ခမှာ ကိုယ်တုို်င်ပါဝင်နေသူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် ၂ ဖက်စလုံးရဲ့အခြေအနေမှန်ကုို Over View အမြင်ရှိဖုို့လုိုပါတယ်။
တနေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ စစ်တုိုက်ရေးထောက်ခံပွဲ ပါဝင်သူတွေမှာ Over View အမြင်မရှိတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘက်တခုကိုရွေးပြီး ထောက်ခံမိတာပေါ့။ ဒါဖြင့် လူများစုကြီးက Over View အမြင်ရှိနေလုို့ ဒီ ဆန္ဒပြပွဲဆီ မလာကြတာလား။ အဲဒီလုိုပြောဖုို့လည်းခက်နေပြန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုို လူများစုရဲ့ ထုံးစံအတုိုင်း နုိုင်ငံရေးနဲ့ခပ်ဝေးဝေး၊ အေးရာအေးကြောင်း နေချင်သူတွေက များနေတယ် မဟုတ်ပါလား။ ဒါဖြင့် လေ့လာသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေမှာကော Over View အမြင်ရှိရဲ့လား။ အများစုမှာ လုံလောက်တဲ့အမြင်ရှိတယ်လုို့ထင်ရပေမဲ့ တချို့လေ့လာသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေကတော့ ဘက်တဘက် ကိုရွေးပြီး ပြောနေ၊ ရေးနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ သူရဲ့ ပရုိုဖက်ရှင်နယ်အလုပ်နဲ့ သူရဲ့နုိုင်ငံရေး၊ အမျိုးသားရေး၊ ဘာသာရေး ရပ်တည်ချက်တွေကြား မပြတ်မသား ဖြစ်နေတာ လုို့ထင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပတိပက္ခတွေမှာ လူများစု ဗုဒ္ဒဘာသာ ဗမာသတင်းသမားတွေ၊ လေ့လာသူတွေက သူတို့ဘာသာ၊ သူတုို့လူမျိုးဖက် ဘက်လုိုက်ရေး တာ၊ ဘက်မလုိုက်ရင်တောင် နဲနဲယိမ်းပြီး ရေးတာ၊ ပြောတာတွေကုို တွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု မြောက်ပုိုင်းမဟာမိတ်နဲ့ တပ်မတော် ကြားဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲမှာလည်း မြို့ပြနေသတင်းသမားတွေနဲ့ Facebook User အတော်များများက လူထုဒုက္ခရောက် တာကုိုပဲရှေ့တန်းတင်ရေးကြပြီး ဒီပြသာနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရ တယ်၊ ဘယ်လုိုဖြေရှင်းရင် ပြေလည်နုိုင်တယ်ဆုိုတဲ့ Over View အမြင်ရေးသူ၊ ပြောသူ အတော်နည်းသေး တာ သတိထားမိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ ပတိပက္ခအကြောင်း သတင်းရေးမယ်၊ လေ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်မယ်ဆုိုရင် ဘယ်ဖက်မှ မပါတဲ့၊ ဘယ်ဖက်နဲ့မှ မသက်ဆုိုင်တဲ့ ကြားလူ။ ဥပမာ အားဖြင့် နုိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေ၊ နုိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေ ပြောတာ၊ ရေးတာက ပုိုပြီးသမာမသတ်ကျလေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ဌာနချုပ် လုိုင်ဇာမြို့နဲ့ သူ့ရဲ့ထိမ်းချုပ်နယ်မြေတွေကို မြန်မာ့တပ်မတော်က သွားတုိုက်တာကို ကျုးကျော်စစ်အဖြစ် ပြည်ပရှိလွတ်လပ်သူတွေကမြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံထဲက လူများစုကတော့ ဒါဟာ တပ်မတော်က ထမ်းရွက်ရမဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ သူပုန်စခန်းတွေကို ချေမှုန်းရေးဟာ တပ်မတော်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လုို့မြင်ကြပါတယ်။
မြောက်ပုိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေက ကန့်သတ်စစ်ဆုိုပြီး တုိုက်ပွဲဖေါ်တာကုို တုိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာ ထိပါးတာလုို့ မြို့ပြဒေသရှိလူများစုကမြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နယ်စပ်ဒေသနဲ့ ပြည်ပရှိလေ့လာသူတွေကတော့ တုိုင်းရင်းသားတွေဟာ တချိန်လုံး အစိုးရတပ်ရဲ့ထုိုးစစ်ကိုခံနေရသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကိုမခံနုိုင်လုို့ အခုလုို ခုခံစစ်ပြန်ဆင်နွဲတာ ဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်။
နှစ် ၅၀ ကျော်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနည်းနာကို ဆက်သုံးမယ်ဆုိုရင်တော့ ဘယ်လုိုမှအဖြေ မရနုိုင်ပါ။ ဒီလုိုအဖြေမရနုိုင်မှန်းသိလုို့ပဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာ NCA တနုိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆုိုရေးကို စတင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ အခု NLD အစိုးရလက်ထက် မှာတော့ ၂၁ ပင်လုံညီလာခံကုိုခေါ်ပြီး သူပုန်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရအောင် လမ်းဖွင့်ပေးပြီး အဖြေရတဲ့အထိ ဆက်လုပ်သွားဖုို့လုိုပါတယ်။
မြောက်ပုိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ တုိုက်ပွဲတွေကို တဖြေးဖြေးအရှိန်လျော့ချသင့်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ ကလဲ့စားချေချင်တဲ့စိတ်တွေကိုမြိုချပြီး အနာဂတ်တုိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကုို ရှေ့ရှုဖုို့လုိုပါတယ်။ တုိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ၂ ဖက်စစ်သားတွေ၊ သေဆုံးသွား၊ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ ပျက်စီးသွားတဲ့ တုိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေခံအဆောက်ဦတွေ၊ ၂ ဖက်တပ်တွေကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ တုိုင်းပြည်ဘဏ္ဍငွေ တွေကို စဉ်းစားဖို့လုိုပါတယ်။ ကျနော်တို့နုိုင်ငံမှာ ဒီလိုအချင်းချင်းအသေအကြေတုိုက်ခုိုက်နေချိန်မှာ အိမ်နီးချင်းနုိုင်ငံက စစ်သားတွေ၊ လူထုတွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲဆုိုတာကိုလည်း စဉ်းစားမိဖို့လုိုပါတယ်။
ဒါက လတ်တလောဆောင်ရွက်ရမဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စပါ။ ဒီကိစ္စတွေ ခပ်မြန်မြန်အကောင်ထည်ပေါ် လာရေးအတွက် NLD အစိုးရဟာ တုိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖုို့လုိုပါတယ်။ လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေကို ခဏထားဦး။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပုိုင်း မုိုးထဲရေထဲမှာ NLD အတူ ထောင်ကျခံရပ်တည်ခဲ့တဲ့ SNLD ရှမ်းအဖွဲ့ချုပ်၊ ALD ရခုိုင်အဖွဲ့ချုပ်၊ မွန်အဖွဲ့ချုပ် စသဖြင့် CRPP (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မီတီ) အဖွဲ့ဝင် ပါတီတွေနဲ့ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်သင့် ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆုိုရင်တော့ NLD အစိုးရဟာ စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင် ထူထောင်ဖုို့ လုိုသလုို တုိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ဖုို့ကိုလည်း တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်ဖုို့လုိုနေပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေအစား NLD ကုို ဦးစားပေး မဲထည့်ခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်- တုိုင်း အသီးသီးက တုိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကုို NLD အစိုးရက ဖြည့်ဆည်းပေးဖုို့လုိုနေပါတယ်။ တုိုင်းရင်းသားအရေးကို ဦးစားမပေးပဲ စစ်တပ်နဲ့ပြေလည်ရေးကို သာ ဆက်ပြီးဦးစားပေးနေမယ်ဆုိုရင် မကြာခင် လာတော့မဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ တုိုင်းရင်းသားတွေက တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေကုိုပဲ မဲပေးတာမျိုး ဖြစ်သွားနုိုင်ပါတယ်။ ။